Keating: Xil ka qaadistii Thaabit waxaa ay abuurtay Muujado siyaasadeed | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Keating: Xil ka qaadistii Thaabit waxaa ay abuurtay Muujado siyaasadeed
Keating: Xil ka qaadistii Thaabit waxaa ay abuurtay Muujado siyaasadeed
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa khudbad dheer ka jeediyay kulan Golaha Ammaanka ay ku yeesheen magaalada New York.
Khudbadda Micheal Keating oo qaadatay daqiiqado badan ayaa waxa uu kaga hadlay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ee sanadkii 2017, isbedelkii nabadeed ee lagu kala wareegay xukunka, kaddib doorashadii Madaxweyne Farmaajo, waxaa si gaar ah diiradda ku saaray waxyaabihii ka qabsoomay Soomaaliya, guulihii ay gaartay dowladda, ammaanka, howlgalka AMISOM iyo dagaalka Al-Shabaab.
Sidoo kale Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating, ayaa sheegay in xil ka qaadistii lagu sameeyay Duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ay abuureen mowjado siyaasadeed.
Ergeyga Qaramada Midoobey ayaa sheegay in dhacdooyinkaas ay muujiyeen dhibatooyinka aas aasiga ah ee ka jira dalka, islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto sida shuruucda aan ku filneyn iyo ilaalinta nidaamka siyaasadda.
Previous articleQaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay Qarixii Zoobe oo dalka dib loogu soo ciliyay (Sawiro)
Next articleCaqabadaha hor-yaala Guddoomiyaha cusub ee gobalka Banadir